Isitolo esidayisa yonke impahla ngokwezifiso ngokwezifiso elibizayo Soy Wax Amakhandlela anephunga Isethi Setha ifektri abakhiqizi | UWinby
ikhandlela lesipho lekhandlela
Ukufika okusha kwe-logo yangasese ye-matte ingilazi enephunga elimnandi lesipho
Amakhandlela e-Aromatherapy enziwe ngamafutha abalulekile ne-wax yesoya, engakhipha ngokuphelele iphunga ngaphandle kwezinsalela ezimbi. Ingasetshenziselwa ukunciphisa ukucindezeleka, ukuthuthukisa ikhwalithi yokulala, nokuhlanza umoya wasendlini.
Amakhandlela amahle anengilazi anamakha nawo angasetshenziswa njengomhlobiso wasekhaya. Lawa makhandlela anamakha ayizipho ezinhle kumndeni wakho nabangane noma nakuwe uqobo. Kungaba izipho zosuku lokuzalwa, izipho zikaKhisimusi, izipho zoSuku Lwezithandani, izipho zokuhlobisa indlu, izipho zezidingo zendawo yokuhlala.
Leli khandlela elinamakha lihambisana nesipho esihle kakhulu. Ngasikhathi sinye, isivalo sesiphathi samakhandlela engilazi sisebenzisa isivalo sensimbi esezingeni eliphakeme, esandisa kakhulu ukwakheka kwalo mkhiqizo.
Igama lomkhiqizo Amathini kathayela wensimbi
Usayizi I-D7cm * H4.9cm
Izinto ikhwalithi ephezulu ye-tinplate
Isembozo Isembozo sensimbi
Umbala Amaphethini nemibala ehlukene
Insiza Custom / ODM OEM / isampula service
sisebenzisa izinhlobo ezingaphezu kwezingu-100 zamakha akhethiwe amakhandlela. Abahlinzeki bethu bamakha ngamakha we-CPL neFirmenich. Zonke ziphezulu imikhiqizo yabathengisi bamakha emhlabeni. La maphunga atholakala kusetshenziswa amakha kanye namafutha abalulekile, futhi kuzokusiza ukuthi udale umoya oduduzayo. Okwamakha, singakunikeza amaphunga ahlukene ngendlela othanda ngayo. Uma uthanda iphunga elinamandla, ungakhetha u-10% wamafutha kukhandlela; uma uthanda iphunga elithambile, ungakhetha u-5% kawoyela kukhandlela.
Langaphambilini Amathini amathini wensimbi ahlobisayo wokwenza amakhandlela
Olandelayo: Izimbiza zamakhandlela ezingilazi ezishisayo ezinesivalo